Top 10 Android Apps: Watch TV iyo Movies Online For Free meel iyo goor kasta oo e
Ma rabtaa in aad daawato TV iyo filimada online for free? Ma leedahay telefoonka ah Android smart? Haddii ay haa tahay, ka dibna aad tahay run ahaantii in boqortooyadii reer fursadaha. Waxaa si fudud xad lahayn waxa qalab in Android in gacmahaaga ku gaari kartaa inta aad leedahay hanuun ku habboon si ay u sahamiyaan qaar ka mid ah barnaamijyadooda ugu yaab leh ee adduunka ee. Haa, run ahaantii aad ka daawan kartaa TV iyo filimada online meel kasta. Maqaalkani waxa uu ku qor doonaa 10ka barnaamijyadooda Android in gaari karo sidaasi sameysa. Iska akhriso oo iyaga ku raaxaystaan.
Qeybta 1: Top 10 Android Apps si uu u daawado TV oo Movies Online
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 1.11- $ 9.20 per item
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spb.tv.am
TV SPB waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee daawashada TV-ga iyo filimada online. Waxaa ka heli kartaa wax badan oo dhan channels iyo geeyo waa tayo fiican leh oo si dhakhso ah. App waxaa loogu talagalay la interface ah fabulously raadinaya taas oo muujinaysa waxyaalaha xiisaha iyo fikrad kaa siinayaa waxa ku yahay. Waxaa la socon kara Chromecast, taageero WIDI iyo Miracast. Hadda waxaad haysataan fursad aad ka daawan aad TV jecel muujinaya meel kasta iyo waqti kasta.
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barrydrillercom.android&hl=en
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u daawadaan oo ay u qoraan 200 TV channels nool tayo leh qeexidda caadiga ah oo lacag la'aan ah. Waxaana ay ku aaddan channels ka UK, Germany, Italy, Asia USA iyo Bariga Dhexe. Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo falgali ay interface si fiican loo qorsheeyay. Sidaas, in aad ku raaxaysato kartaa TV jecel show aan qas kasta.
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.mediaclient&hl=en
Tani waa app ah taas oo awood u socodsiinta ah TV live channels ku yaal. Waxaa dhici karta in dhaawac yar uu u noqonin ugu fiican ee lala simo kale ciyaartoyda video laakiin waa dooqa koowaad ugu app geeyo TV. Tani waa la jaan qaada nooca qalab. Waxaad ku raaxaysan karaan TV jecel aad barnaamijyada live on go oo aan walaaca iyo oo lacag la'aan ah.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 0.99- $ 3.64 per item
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viki.android
App Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine TV muujiyay caalami TV, wararka madadaalada, filimada iyo waxyaabaha premium kale badan oo tayo sare leh oo lagu tarjumi karo in ka badan 100 luqadood oo bulshada ka mid ah taageerayaasha u xiiseeya. Way fududahay in la falgali oo ay isticmaalaan oo kaa caawin doona inaad la socoto oo ku saabsan filimada aad jeceshahay iyo bandhigyada TV.
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotv.crackle.handset
App kale oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay dadka doonaya in ay daawadaan TV ee Android waa Crackle. App Tani waxay bixiyaan qaar ka mid ah dadka isticmaala ay muujinayso hit TV, filimada wanaagsan oo taxane fiican. Si kastaba ha ahaatee, waxa ku jira barnaamijyadooda si dhab ah ku koobnayn balse xataa in, weli waa app sarre.
Viggle ku siinayaa abaal marin daawashada TV bandhigyada ay app. Sidaa darteed, sida xaqiiqada ah aadan lumin wakhtigaaga daawashada TV muujinaysaa on app Viggle ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo hubiyo TV barnaamij aad la Viggle baxay oo aad ka heli doonaa dhibcood abaalgudkiinna aad.
IMDb waa gaabinta ah taasoo la micno ah Internet iyo Movies Database. Waa ururinta ugu weyn ee horyaal TV, filimada iyo waxyaabaha ay caanka. App IMDb siinayaa fursad ay ku daawadaan filimka cusub trailer, aad u hesho macluumaad ku saabsan filimada, agaasimayaasha, actorada iyo atariishooyinka, aad. Waxa kale oo aad filimada la wadaag saaxiibadaada karo.
Tababare Taxanaha 8. Guide Show
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 1.35- $ 6.76 per item
The Manager Taxanaha Guide Show waa mid ka mid ah tababaraha ugu fiican oo ay leeyihiin hage TV iman kara ee raad dhan waydaarsaday ee ay muujinayso TV. Isticmaalka app tani waxay suurtogal aad si aad u hubiso oo dhan update aad TV jecel muujinaysaa ay ka mid yihiin kuwa in ay yihiin soo socda in la sii daayey on channels. Sidoo kale waxay muujinaysaa dhacdooyin soo socda la magaca, tirada iyo sidoo kale mar.
URL Download: http://www.androidfreeware.net/get-tv-com.html
The app android TV.com kana soobixiya wax muujinaya TV in aad telefoonada android. Waxaad daawan kartaa filimada dhererka buuxa, TV muujinaysaa meel kasta iyo mar kasta taleefanka aad android gabi ahaanba bilaash ah. Hel xiiso leh videos ka Showtime iyo wax ka badan. Waa ay fududahay in la isticmaalo. Si fudud dhirtuba, dooro muujinayso oo ay daawadaan. TV.com yimaado leh interface-dhexgal fiican u daalacanaya muujinaya TV oo ku saabsan fursadaha cutubka screen menu halka arkaysid.
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undertap.watchlivetv
MobiTV waa app aad u faa'iido android loogu daawashada TV on go ah. Dhab ahaantii, la MobiTV, waxaad haysataa fursad aad ku ah daawashada TV-ka adduunka oo dhan ee telefoonka gacanta, meel kasta iyo waqti kasta. Waxaa qoreysa cajalado jadwalka DVR, caleenta iyo hage barnaamijka goobidda iyo in ka badan 300 live TV channels lacag la'aan ah SD. Waa app fudud oo aad u fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo.
> Resource > Video > Top 10 Android Apps: Watch TV iyo Movies Online For Free meel iyo goor kasta oo